Ama-FAQs - iQuanzhou Stamgon Trading Co, Ltd.
Izingubo zokubhukuda zamaSulumane
into eyodwa yokubhukuda
I-Yoga dress set
Siyayazisa imfihlo yakho
Siyayazisa imfihlo yakho. Asithengisi, asiqashe noma siboleke noma iyiphi imininingwane ekhonjwayo (kufaka phakathi ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, njll.) Maqondana namakhasimende ethu kunoma ngubani. Ngeke sikucele ngocingo noma ngeposi. Noma yiluphi ulwazi osinikeza luzosetshenziswa ngokunakekela, luphethwe ngokukhulu ukucophelela nangokuvikeleka, futhi ngeke lusetshenziswe ngezindlela ongavumanga ngazo.
sisebenzisa ukupakisha okulula, yonke isethi igcwele esikhwameni sepulasitiki, noma amasethi ayi-10 esikhwameni esikhulu sepulasitiki, noma esenziwe ngokwezifiso.
Uyacelwa ukuthi ubheke isigaba "sesayizi" kumkhiqizo ngamunye ukuthola eminye imininingwane. Mayelana nethadi losayizi, sicela uvakashele: ishadi losayizi
Uyasemukela isimo se-OEM nokuthi yini ubuncane ubuncane besimo se-OEM?
Yebo, isimo se-OEM siyemukelwa futhi ubuncane obuncane buxhomekeke ezintweni ozi-oda ngazo. Futhi sicela uthumele izithombe eziyimodeli ngokucacile ofuna ukusiyala zona, sizosifaka kubaqambi bethu, uma nje sinakho, singakukhiqizela isikhathi. Uma kungenjalo, sizokuthungatha, bese senzela umkhiqizo. bese uthumela amasampula nezinye izinto eku-oda kwakho kuqala ukuze ukwazi ukubheka.
Sisebenzisa indwangu esezingeni eliphakeme engelulwa kalula ngamasudi okubhukuda, ne-100% polyester yezicucu zolwandle, noma egcizelele.
Mayelana nentengo nokukhokha
Ungasithumela umyalezo noma uphenye, usitshele imodeli engekho yemikhiqizo oyithandayo kanye nobungako obuceliwe, khona-ke sizokuthumela ikhotheshini.
Sinikeza ngesaphulelo ngobuningi obuhlukile, sicela uxhumane nesidingo sakho sobuningi.
Imininingwane yethu yokukhokha nemali yasebhange.
Samukela amaKhadi Wezikweletu, Okudluliselwa Kwebhange. I-oda elincane noma elinesampula, semukela ukukhokha ngqo ku-inthanethi.
Uma ufuna ukungikhokhela ngeBhange, sicela uxhumane nathi.
Mayelana nesikhathi sokukhokha
Samukela izinkokhelo ezenziwa online nge-Cards Cards. Ukukhokha Okujwayelekile kufanele kwenziwe kungakapheli izinsuku ezi-3 zoku-oda. Uma kukhona noma yisiphi isizathu sokuphuza ukukhokha, sicela uxhumane nathi kuqala. Ngiyabonga.
Ubungakanani be-oda obuncane?
A: kwisitayela sethu sesitoko, i-MOQ izoba ngama-pcs ayi-10 ngesitayela / umbala ngamunye.
Futhi ngomklamo owenziwe ngokwezifiso, i-MOQ: isiqeshana esingu-200 ngesitayela / umbala ngamunye.
Ungakwazi ukusenzela isampula?
Impendulo: Yebo, kepha kufanele ukhokhe izindleko zesampula nezindleko. Ungasithumela isidingo esiningiliziwe sesampula ukuze sikwazi ukubheka izindleko nesikhathi sesampula, ngemuva kokuthola inkokhelo yakho, sizohlela i-oda lakho lesampula ngokushesha.
Ungakwazi ukufaka uphawu lwethu emikhiqizweni?
A: Yebo. Sinikeza insizakalo yokwengeza i-logo yamakhasimende, sicela uthumele ubuciko bemidwebo ye-logo ngefomethi ye-PDF noma ye-AI.
Sizothumela ngamaphakeji we-EMS / DHL / UPS / TNT aphesheya kwezilwandle, noma sizohamba ngolwandle uma i-cubage yoku-oda ingaphezulu kwe-1cbm, kuye ngobungako.
Kuthatha izinsuku ezingaki?
Ngokujwayelekile kuthatha izinsuku zokusebenza ezingama-3-4 kuwo wonke umhlaba ngama-UPS, nezinsuku zokusebenza ezingama-5-7 ngabakwa-EMS (ngaphandle kweRussia), nezinsuku ezingama-4-5 zokusebenza yi-TNT / DHL ngokuya ngendawo ohlala kuyo.
Mayelana nesikhathi sokulethwa
Uma ulungiselela ukufaka i-oda, sizobheka i-oda lakho kuqala bese sikuthumela i-invoice kuwe kungakapheli amahora angama-24. Futhi izinto ezigciniwe sizokuletha kungakapheli izinsuku eziyi-7, ngaphandle kwalokho sizokuqinisekisa isikhathi sokulethwa kanye nawe.
Ngitshele izindleko zokuthumela ngaphambi koku-oda
Izindleko zokuthumela zincike kusisindo, ivolumu kanye nendlela yokulethwa (i-EMS, i-DHL, i-TNT, i-UPS, noma yokuhamba olwandle) nezwe lokuya kulo. Ngakho-ke kunzima ngathi ukuthi simemezele imali yokuthumela ngqo ngaphambi kokufaka i-oda （ isisindo esilinganayo se-bikini eyodwa yocezu singama-0,2kg, kepha isisindo sevolumu sicishe sibe ngu-0.5kg / pc). Futhi ungakhetha inkampani yokuthumela oyithandayo futhi sizobheka yonke i-Express futhi sikuphakamise indlela efanele kakhulu.
Mayelana nokubuyiselwa & imigomo
Sifaka ukubaluleka kwekhwalithi yomkhiqizo nezinsizakalo, ngakho-ke ngaphambi kokuthumela iphasela, kufanele siwubheke kabili umkhiqizo bese siwupakisha ngokwethu.
Ungabhekana kanjani, Uma into inephutha?
Siyaxolisa ukuthi le nto ayinasici, futhi sizobhekana ngqo nezigameko ezinje. Sidinga usizo lwakho.
Okokuqala: Uma into inephutha, sicela usazise ezinsukwini ezi-3 zokulethwa.
Okwesibili: ngicela usidubule isithombe sento sinesici, bese usithumela isithombe nge-imeyili, ukuze ngikwazi ukusithumela kuMqondisi wethu wezobuchwepheshe, ngemuva kokuhlola nokuvuma, sizokwengeza okusha kwi-oda lakho elilandelayo mahhala.
Buyisela noma inqubomgomo yokukhansela
Ukuze uhlinzeke izinsizakalo zamakhasimende ezilula, samukela ukubuyiswa nokukhanselwa kwama-oda kungakapheli amahora angama-24.
Ngaphezu kwakho konke, siyabonga ngokubeka i-oda kuwebhusayithi yethu www.stamgon.com . Ukwaneliseka kwakho kuzoba ngumthombo wethu omkhulu wokugqugquzela.
Sibeka ikhasi ukukuvumela ukuthi uthole indlela ehambisanayo yokulandela umkhondo yenkampani ngokushesha futhi sethemba ukuthi ingakusiza ekugcwaliseni uphenyo lokulandela ngomkhondo i-oda.
Kusho ukuthi sithumele i-oda lakho lapho uthola inombolo yokulandelela. Ungahlola isimo sephakeji yakho ku- umkhondo we-oda lokulandela . Noma yimiphi imibuzo, sicela uxhumane nathi ngokukhululekile!
I-PS: Kwesinye isikhathi iveza ukubambezeleka kokuvuselelwa kwemininingwane ekuwebhusayithi yabo. Ngakho-ke ngicela ubekezele futhi uyihlole esikhathini esizayo. Ukuqonda kwakho kuzokwaziswa kakhulu, ngiyabonga!
Ikheli: Igumbi 905, Rongtaian Building, No.139 Jinhuai Street, Quanzhou, Fujian, China